ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းသတင်း | Myanmar Medical Association (MMA)
MYANMAR MEDICAL JOURNAL, Volume 59, No.3, September 2017
MMA NewsLetter, Vol. 12, No.5, September 2017
63rd Myanmar Medical Conference 20th -24th January, 2017
ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းသတင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘူးသီတောင်၊ မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်မြို့ နယ်များရှိ ကျေးရွာများမှ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွင် ဒေသခံပြည်သူများအား (၂၃-၉.-၂၀၁၇) မှ (၂၅-၉-၂၀၁၇) အထိ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် အဖွဲ့က စခန်းများအထိ သွားရောက်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှာက်မှု ပေးခဲ့ပါသည်။
စစ်တွေမြို့ပြင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်သော ရေပိုက်စုံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းတွင် ဒုက္ခသည် (၁၀၀)ခန့်ကို ကြည့်ရှုကုသပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ကုသရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စစ်တွေမြို့၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်တို့ ဦးဆောင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါသည်။
၂၄-၉-၂၀၁၇၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နံနက် (၇း၀၀) နာရီတွင် စစ်တွေမြို့မှ မောင်တောမြို့သို့ စက်တပ်အမြန်မော်တော်ဖြင့် ခရီးထွက်ခဲ့ရာ နံနက် (၁၀) နာရီခန့်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး ကားဖြင့် ခရီးဆက်ခဲ့ရာ မောင်တောမြို့အ၀င် (၄) မိုင်၊ အလယ်တန်းကျောင်း ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ မွန်းမလွဲမီ ၀င်ရောက်ပြီး လူဦးရေ (၁၀၀) ခန့်ကို ကြည့်ရှုပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၄-၉-၂၀၁၇ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ ဓမ္မဗိမာန် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးများအပါအ၀င် ဒုက္ခသည်ဦးရေ (၂၄၉) ဦးနှင့် မျက်စိအထူးကုနှင့်ပြသူ (၇၅) ဦး ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ပါသည်။ မောင်တောမြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီးနှင့် မောင်းတောမြို့မှ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ပါဝင်ကူညီကြပါသည်။ မောင်တောမြို့တွင် ယနေ့ထက်တိုင် နေ၀င်မီးပြတ် (crufew) ကို ကျင့်သုံးနေရဆဲ ဖြစ်ပြီး ညနေ (၆း၀၀) နာရီအထိသာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၅-၉-၂၀၁၇၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် (၇း၀၀) နာရီတွင် မောင်တောမြို့၊ မြို့မကျောင်းရှိ အကြမ်းဖက်မှု ဒဏ်ခံဒေသမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော စာသင်ခန်းသို့ အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မောင်းတောမြို့နယ် ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းနှင့် ပြည်သူများမှ လှူဒါန်းခဲ့သော ဆေးဝါးပစ္စည်းများကို ၀င်ရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မောင်တောမြို့မှ ဘူးသီးတောင်မြို့သို့ မော်တော်ကားဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ဘူးသီတောင်မြို့သို့ နံနက် (၈း၃၀) တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နံနက်ပိုင်း (၈း၃၀) မှ (၁၁း၃၀) အထိ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အလိုတော်ပြည့်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း ဓမ္မာရုံတွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ (၁၉၃) ဦးကို ကြည့်ရှုပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘူးသီးတောင်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ စက်တပ်အမြန်မော်တော်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် လေကြောင်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ (၂၅-၉-၂၀၁၇) ညနေပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) မှ ထောက်ပံ့သောဆေးဝါးများ (ယခင်ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် လှူဒါန်းထားသော ဆေးဝါးလက်ကျန်များ အပါအ၀င် ကျပ်ငွေ သိန်း (၂၀) ခန့်
– ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံတို့မှ ရခိုင်ဆရာဝန်များ အပါအ၀င် စေတနာရှင် ဆရာဝန်များ၏ မိသားစုများ လှူဒါန်းသော ကျပ် (၆)သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
© 2016-2017. Myanmar Medical Association (MMA). All rights reserved. Web Design by NetScriper